लकडाउनको बेलामा घरमै बसेर कन्ये च्याउ उत्पादन कसरी गर्ने? -सुजन सापकोटा - SAJHA SEWA
Agriculture Health Latest News
च्याउ भन्नाले एक प्रकारको ढुसीबाट उम्रने स्वादिष्ट पौष्टिक खाद्य पदार्थ हो। साधारणतया च्याउ भनेपछि जङ्गलमा पाईने च्याउलाई सम्झिइन्छ तर कतिपय च्याउहरुको कृत्रिम तरीकाबाट घरमै खेती गर्न सकिन्छ र हाल आएर व्यावसायिक खेती भैरहेको अवस्था छ।च्याउ धेरै प्रकारका हुन्छन् तर नेपालमा खेती भइरहेका मध्येमा गोब्रेच्याउ, कन्येच्याउ, रातो च्याउ, सेतो च्याउ आदि मुख्य हुन्। च्याउ खाने मानिसहरू बढेसँगै यसको व्यवसाय पनि बढिरहेको छ। खेती गर्नलाई धेरै ठुलो ठाँउ पनि नचाहिने तथा बेच्नलाई सजिलो भएकाले यसप्रतिको आकर्षण बढेको हो। के यसलाई घरमै बसेर खेती गर्न सकिएला? त्यसो भए के कस्ता कुराहरू नजानी हुँदैन?
बीउ कसरी छान्ने?
कन्ये च्याउ खेती गर्नको लागि सफा र राम्रो कुन्यू लगाएको पराल हुनु पर्दछ । परालमा हरियोपन भएको खण्डमा ढूसी फैलन गाह्रो पर्दछ । आपूmलाई चाहिने जति राम्रो पराल जोखिसकेपछि करिब २–३ इन्च लामो टुक्रा पार्नु पर्छ । यो पराल टुक्रा पार्नको लागि भुस्सा काट्ने कैंची ९चुलेसी० प्रयोग गर्न सकिन्छ । टुक्रा पारेको पराललाई कमसेकम दुई घण्टासम्म सफा पानीमा भिजाउनुपर्छ अर्थात रातभरी भिजाए पनि हुन्छ । भिजाइसकेको पराललाई ठूलो बाटा वा भा“डोमा सफा पानी राखी राम्रोसंग पखाल्नु पर्दछ । पखाल्दा पखाल्दै पानी धमिलो भने भने फेरि सफा पानी फेर्नु पर्दछ । यसरी पखालिसकेपछि परालको पानी तर्कन दिन २–४ घण्टा राख्नु पर्दछ । परालबाट पानी तर्काउनको लागि १ मिटरमा काठको फ्रेम राखेर बनाई त्यो जाली भुईबाट उठाई भुईमा नछुने गरी राख्नु पर्छ त्यस माथि भिजेको पराल राख्दा पानी चा“डै तर्किन्छ । पानी तर्काइसकेको पराललाई हत्केलामा एकमुठ्ठी लिई थिचेर हेर्दा यदि पानीका थोपाहरु ननिस्की खाली हत्केला मात्र भिज्यो भने त्यसमा पानीको मात्रा ठीक रहेछ भनि यकीन गर्न सकिन्छ यदि पानीको थोपाहरु धेरै निस्केको देखियो भने त्यसलाई अरु १–२ घण्टा पानी तर्काउन राख्नु पर्छ ।
पराल बफाउनेको लागि ड्रम अथवा माटोको पोटासी प्रयोग गर्नु पर्दछ । ड्रममा तल पट्टि ६ इन्चसम्म पानी राखी त्यसमा ३–४ वटा इ“ट्टा ठड्याएर राख्ने । अनि त्यसको माथि जाली अथवा प्वाल प्वाल परेको चक्का राख्नुपर्छ । अनि मात्र परालले ड्रम भर्नुपर्दछ । ड्रमको मुखमा प्लाष्टिकले राम्रोसंग छोपेर डोरीले बा“ध्नुपर्छ । ड्रमको माथिबाट वाफ आउन थाले पछि कम से कम आधा घण्टा ९३०मिनेट० सम्म पराललाई बफाउनु पर्दछ । यसरी बफाउ“दा परालमा भएका हानिकारक कीरा र जीवाणुहरु नष्ट हुन्छन् । बफाएको पराललाई चिसो नहु“दै प्लाष्टिकको धोक्रामा वा ड्रममा नै राखेर चिसो पार्नुपर्दछ ।
२. च्याउको पोकामा कहिलेका“ही जंगली च्याउ ९कालो खालको आउन सक्छ । जंगली च्याउ पहिचान गरी आउना साथै टिपेर फाल्नुपर्छ ।
३.कुनैकुनै परालको पोकामा सेतो ढूसी नआइन, कालो, निलो, हरियो ढूसी आउन सक्छ । यस्तो आएको पोका त्यहा“बाट
४.कोठामा हावाको संचालन राम्रो नभएमा च्याउको डा“ठमात्र लामो भएर आउछ ।
२. च्याउ घाममा सुकाउनु हुदैन किनकि घामले च्याउको रंग र गन्ध हराउ“छ । तर सोलार ड्राएरमा सुकाउदा भने राम्रो हुन्छ ।
← अध्यादेश टर्‍यो, त्रिशंकु हुँडलो टरेन
नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै →